Aluminium izikebhe Buyisela | Esasinenjini Isikebhe Motor yokulungisa
Njengesipho umhlalaphansi kuye ngokwakhe, Umkhulu wathenga entsha, phansi flat, ukudoba aluminium isikebhe. Aluminium kwaba impahla empeleni esasisesisha elisetshenziswa izikebhe ke. Lesi sikebhe ayebhekwa "zakamuva" e 1966. Kuze kube kuleli qophelo, wenza izikebhe lakhe lokudoba aphume ipulangwe. Isikebhe esasihamba ngaso 16 unyawo ubude, isikhathi esingaphezu izikebhe kakhulu ngosuku, kodwa kudingeka ukudoba fly ukuze abantu babekwazi ukudoba ngokuhlukaniselwa olwanele ukuze kugwenywe imigqa kokuthola obuntofontofo. Ngicabanga umkhulu futhi wayecabanga ekudobeni izingane grandkids njengoba umndeni wakhe wanda. Kwakubuye kube ukuxegiselwa kakhulu kunalokho izikebhe yakhe endala sokhuni, ukukhanya okwanele kungenzeka ukuthi uqalise futhi ukulayisha ke eyedwa. Lesi sikebhe, kanye 1963 Evinrude 3hp yakhe motor kanye Silvertrol bengena ezingosini zayo motor, lalakhiwe Irvin Travis fly ukudoba isikebhe ngokuthi ngafunda ukudoba futhi akhula.
Umkhulu wami wayengumdobi wezimpukane futhi ukudoba izimpukane kwakuwukuphela kohlobo lokudoba esasilwenza. Ngasijabulela kakhulu isikhathi engasichitha ngidoba nomkhulu wami, ubaba, namanye amalungu omndeni. Usifundise sonke izifundo eziningi zokuphila, futhi ngizibheka njengenhlanhla enkulu yokuba nomkhulu onje. Ngemuva kokudlula kwakhe emhlabeni ngo-1981, mina nobaba asizange sikwazi ukuzidoba ngokomzwelo iminyaka engaba yishumi. Isikebhe sikamkhulu sagcina sesiseduze kweshede ekhaya lami eminyakeni engama-30 + elandelayo. Mina nobaba sabuyela ekudobeni, kodwa ngezikebhe ezintsha, ezikhululeke kakhudlwana nezihamba ngemikhumbi. Kwakungalesi sikhathi lapho sazibandakanya khona ne-Indianapolis Fly Casters abasisiza basibuyisela ekudobeni. Sasiqhubeka ngenjabulo isiko lokudoba izimpukane emachibini ase-Indiana nasemigodini emincane lapho umndeni wami ukhula. Ekugcineni, sathola izikebhe ezimbili zokudoba zaseGheenoe ezazizohlala abantu abahlanu abadobayo.
Le entwasahlobo, ngahlela uhambo ukudoba big noBaba, uMalume nendodana yakhe, nendodana yami, umshana, futhi ngokushesha ukuba abe yindodana nomalokazana ngubani Ngifuna ukuwenza umdobi fly ngaphambi kokuyamukela emkhayeni. Lokho kwenza izinto zaba engase eziyisikhombisa kithi, futhi ngaqaphela ukuthi sasidinga esinye isikebhe. Ngaya ecaleni legazi lami, egcotshwe kude 4 amayintshi zikaphayini izinaliti futhi ikhukhulwa isikebhe sokudoba kamkhulu ubudala. Isikebhe esasihamba ngaso ukuma nelesabekayo emva ehlezi iminyaka 30 +. Lolu khuni kwaba zonke ebolile. Amabhawudo eyayibamba ukhuni ndawonye bonke egqwalile, isikebhe sase kabi namabala kusukela izinaliti kaphayini nokuba phansi. Kwakungenzeka kanjani ukuba Ngikubonise isikebhe likamkhulu ziba zimbi isimo esinjalo? Yingaleso sikhathi lapho ngenza isinqumo ukuthi ayibuyisele.
Ubaba nomalume Curt kukhona kokubili 80 zabo. Angazi ukuthi bangaki ngaphezulu ukudoba uhambo sonke sizakuphila baye ndawonye ukuze sokubuyisela le isikebhe, ukuthi sonke ukukhumbula fly ukudoba e, baba zonke kubaluleke kakhulu kimi. Nganquma ulibuyise ngangokusemandleni ami ukubamangaza ohambweni lwethu.
Kwangithatha cishe amasonto amabili, ukusebenza phakathi izihlambi nemvula ukuze yenza lesi sikebhe beyimiqemane. Isikebhe esasihamba ngaso ukuma esibi kangangoba nganquma isihlabathi kuqhuma kanye uyipende. Angizange wasebenza Blaster isihlabathi phambi kodwa wakwazi ukuboleka eyodwa ukusebenzisa nge air yami compressor. Ngemva bula isikebhe kuzo zonke womtholo, egqwalile imishudo steel, mina isihlabathi kuqhunyiswa phansi ukuze aluminium elingenalutho. Ngenza ushiye ukwenza ngezifiso ezimbalwa ukuthi umkhulu ozala ubaba kwadingeka ezifana ziza kuqala nokuhlala izingwegwe aft clip ku wire izinhlanzi emaqomeni, izibambo ekhethekile ezinhlangothini ngoba ukuqaliswa uhlangothi, ngakho singathanda ukwazi kwakuseyimpi isikebhe sakhe.
Ngisebenzise i-trailer yensiza njengebhentshi lomsebenzi futhi ngagcwalisa isikebhe esigcwele amanzi ukuthola ukuvuza, okwakukuningi. Ngithathe indawo yama-rivet amaningana avuzayo nalawo ahamba phambili ngafaka amantongomane namabhawodi manje agqokile abesewasebenzisa ngokushesha esikhundleni sezintambo. Ngemuva kokuhlanganisa ukuvuza, ngisebenzise isifutho sopende ngapenda ingaphakathi nengaphandle lezinyawo zesikebhe, ngashiya phansi kungashintshiwe ngoba ibala langempela elisele ngemuva emanzini omgodi ogqobayo. Ngibe nesikhathi esinzima ukuthola "upende wesikebhe sokudoba" ezitolo ezijwayelekile zehadiwe nopende endaweni. Ngazimisela ukuya kuJohn Deere wendawo ngathenga uphethiloli ophefumulayo ongamalitha kaJohn Deere, engabona ukuthi uzolungela isikebhe sokudoba, futhi nganginembile! Ngakha kabusha ipulatifomu yesihlalo futhi nginyathela intaba yezimoto ngaphambili kwesikebhe, ngisebenzisa ukhuni oluncane ngangokunokwenzeka ukuze ngingezi isisindo esiningi. Ngiphinde ngashintsha izinkuni ku-transom.
Nginqume ukuthuthuka. Nganginemali, amathuluzi, nezesekeli uBabamkhulu wami ayengenazo ngesikhathi sakhe. Ngingeze izihlalo ezintsha ezintathu zikanokusho ezinokunethezeka okumsulwa uma kuqhathaniswa nezihlalo ezilula zesikebhe ebesinazo phambilini. Ngazakhela izihlalo zami zokuhlala. Uma ubhekisisa izithombe, uyabona ukuthi izihlalo zingashintsha ukusuka kolunye uhlangothi kuya kwesinye ukugcina isikebhe silinganisela. Lokhu kwaba yinto yami yokusungula. Izihlalo beziphenduphenduka zifakwe ama-swivels akhipha ngokushesha.
Umkhulu wami ababenayo ekuqaleni ezimbili 6 volt amabhethri for motor bengena ezingosini zayo wasifaka phakathi emkhunjini ngemva kwesihlalo phakathi. Ngenza okufanayo ngaphandle eyodwa kuphela 12 volt ibhethri. Ngagijima a "jumper ikhebula" kusukela maphakathi ngemkhunjini ngaphansi phambi kwesihlalo futhi wasebenzisa imishudo kanye washers ukwenza indawo bengena ezingosini zayo amandla motor ikhebula ukuxhuma. Ngingeze iflothi isebenze Bilge futha, into ayefika Ukugunda uma isikebhe waqala avuzayo futhi. Asikaze sibe futha Bilge esikebheni esidala.
Kwakusadingeka original Evinrude 3hp Lightwin motor okuyinto ngibuyiselwe eminyakeni embalwa edlule, futhi wakhe Silvertrol bengena ezingosini zayo neyezicubu ngahlanza futhi ibuselwe isikebhe. Nganquma ukuthi ngifuna ukuba abeke igama likamkhulu esikebheni ngakho kwadingeka kwezinye izitikha bumper yakhiwa ukuthi wathi "u-Irvin Travis, esikhulu 'stripper emgodini' fly umdobi - Spurgeon Indiana", okuyinto engangicabanga intela efanelekayo.
Ngemva kwehora noma ngaphezudlwana kokuncoma isikebhe, oyedwa aphakanyisiwe Beshiya isikebhe njengoba ucezu Museum, kodwa nganquma ukwethula, wavumela indodana yami, Tommy, nendodana nomalokazana, Alex likhiphe ukudoba kusihlwa. Njengoba ngibé nethemba lani, isikebhe wasebenza kahle. Ubaba unqabile ukuphumela ngesikebhe ngoba sintula ibhalansi ayenakho esemusha futhi ayethanda ukuphepha izikebhe entsha. Mina Curt wathatha lesi sikebhe futhi sabona ukuthi kwakuzodingeka senze kabusha ufunde art eside ukhohliwe yokudoba fly ngenkathi cha tipping esikebheni. Mina Curt kukhona ngoyisiwula kusinda kakhulu kunathi eminyakeni abancane kwakudingeka siqaphe. Ekugcineni, sabamba futhi kwadingeka ukudoba fun aphume ukuthi emkhunjini futhi, nakuba ngokuvumela inyoni yami inja ngesikebhe wazibonakalisa ingozi nje kakhulu.